Home News Duqayn xoogan oo kadhacay Gobolka JubBada Dhexe.
Duqayn xoogan oo kadhacay Gobolka JubBada Dhexe.
Degmooyinka ay duqeynta ka dhacday ayaa waxaa ka mid ah Jilib iyo Bu’aale oo dhamaantooda ka wada tirsan gobolka Jubada Dhexe.
Labada duqeyn ayaa la sheegay in lala beegsaday xarun tababar oo ku taala inta u dhexeysa Jilib iyo Hargeysa yarey, iyo Degmada Bu’aale.
Saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga ayaa sheegay in saraakiil iyo dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab duqeynta lagu dilay.
Dhinaca kale degmada Bu’aale ayaa waxaa xalay duqeyn lala beegsaday sargaal sare oo katirsan macalimiinta bixiya tababarada Al-Shabaab, kaasi oo lagu magacaabi jiray Macalin Yoonis Karaama oo loo yaqaano Abuu Cuteyba, xili uu ku sugnaa hoygiisa.